Baasaska Ragga: Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Caalamikaan | Ragga Stylish
Baarkinka ragga waxay ka mid yihiin dharkaas aan waligood ka bixin qaabka. Qeyb muhiim u ah ururinta jaakadahaaga iyo jaakadaha, heer la mid ah jaakadda maqaarka ama qofka is qarxiya.
Shaki kuma jiro in jardiinadu tahay maalgashi aad u fiican sida jaakad qabow. Iyo marka la eego nuqulada nalka, sidoo kale nuska. Aynu aragno faa'iidooyinkiisa iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u saxdo markaad mid iibsaneyso.
1 Furayaasha jardiinada
2 Qaab noocee ah ayaad doorbideysaa
2.1 Jardiinada arctic
3 Maxay yihiin noocyada ugu fiican?
Si ka duwan noocyada kale, baarkinka waa jaakad ku saleysan gebi ahaanba shaqeynta. Ujeeddadeedu maahan in lagu qurxiyo muuqaal ahaan, laakiin waa in la bixiyo ilaalinta ugu badan ee jaakaddu awood u leedahay marka la eego heerkulka hoose iyo roobka. Sidaa awgeed, way ka dheer tahay qaababka kale (waxay daboolaysaa ilaa bowdada dhexe, qaarkood xoogaa wey dheer tahay) waxaana ku jira dabool. Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan in jardiinooyinku aysan fiicneyn. Waxaa jira jardiinooyin badan oo aad u soo jiidasho leh qaabkooda.
Parkas waxay ku siineysaa suurtagalnimada inaad u isticmaasho xilliga jiilaalka xilliga qaboobaha ka dib, oo ah moodel wanaagsan oo wanaagsan Laga bilaabo Diseembar illaa Maarso waxay ku siin doontaa ciyaaro badan oo ay ugu mahadcelinayaan kala duwanaanshaheeda weyn, taas oo ka caawin doonta inay ka badnaato inta badan dharka caadiga ah ee dharkaaga. Laakiin sida aan gadaal ka arki doonno, jardiinooyinka saxda ah waxay sidoo kale ka shaqeeyaan muuqaallo rasmi ah oo aan dhibaato lahayn.
Asalka jardiinadu waxay la xiriirtaa ciidanka, taas oo ah sababta cagaarka milatari uu yahay mid ka mid ah midabada ugu badan ee loo isticmaalo jaakadan, gaar ahaan marka soo saaruhu uu raadinayo natiijo aan waqti lahayn. Si kastaba ha noqotee, tobanaan sano ayaa laga joogaa markii beerta la waafajiyay magaalooyinka. Waxaa hadda lagu soo saaray noocyo kala duwan oo midabbo ah, iyo sidoo kale qalab iyo qaabab. Weli waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad aadi karto jardiinooyin dhaqameedyo badan, laakiin suuqa wuxuu kaloo bixiyaa beddelaadyo xiiso leh oo loogu talagalay kuwa u baahan kuwa aan caadi ahayn, kala duwanaansho iftiin leh ama dhar ka yar.
Qaab noocee ah ayaad doorbideysaa
Haddii aad horay u go'aansatay jardiinada, tallaabada xigta ayaa ah inaad doorato qaabka aad ugu jeceshahay. ka jardiinada arctic waxay xirataa timo, halka kala duwanaanta loo yaqaan kalluunka kalluunka uu ka dheer yahay xagga dambe marka loo eego dhinaca hore. Haddii aad doorbideyso qaabka jaakadaha, tixgeli noocyada gaagaaban. Baarkinka ragga ee miisaanka yar ayaa ku habboon waqtiga nasashada, halka kuwa loogu talagalay ay bixiyaan qaab la mid ah jaakadaha rasmiga ah. Ugu dambeyntiina, waxaa jira jardiinooyinka nooca kangaroo-ga ah, oo ku socda isbeddel iyo helitaanka magacan maxaa yeelay waxay ku leeyihiin jeeb weyn xagga hore.
U fiirsashada dharkaaga ayaa kaa caawin kara markay tahay xulashada qaab. Haddii dharkaagu ku badan yahay dharka rasmiga ah, tixgeli jardiinooyinka sartorial. Sababta ayaa ah iyada oo la adkeeyo isla markaana aad loo yareeyo (naqshadeeyayaashu waxay raadinayaan inay naqshadda siiyaan nadaafadda ugu weyn ee suuragalka ah iyaga oo aan u hurayn ruuxa dharka), waxay sameyn doonaan koox fiican oo ku habboon dacwadahaaga oo leh muuqaal muuqaal guud ahaan leh. Qaar ka mid ah jardiinooyinka qaab dhismeedka qaab dhismeedka ee ragga waxaad ku guuleysan doontaa saameyn la mid ah tan jaakad qotodheer, laakiin leh taabasho casri ah oo dabacsan.
Bedelkii, jardiinada arctic (iyo guud ahaan dhammaan moodooyinka qaro weyn) waa jaakad aad u tiro badan oo aan rasmi ahayn. Sidan oo kale waxay ugu shaqeysaa sifiican labbiska dhididka, funaanadaha flannel, kabaha shaqada iyo qaybo adag guud ahaan. Dhanka kale, haddii qabow dhaqso ah yimaado, cidna kuma eedeyn doonto inaad xirtay si aad xafiiska u aado. Waxaa jira waqtiyo marka diirimaadku ay tahay in laga hormariyo xarrago.
Adagnimada jardiinada Arctic waxaa u sabab ah xaqiiqda ah inay ka dhalatay baahida loo qabo in laga ilaaliyo qabow daran. Ku qalabaysan timo, haddii aad u baahan tahay inaad diirimaad hesho, waa qaabka ay tahay inaad ku maal gashato lacagtaada. Taasina waa in nylon iyo dahaarka dahaadhku ay caqabad adag dhex dhigaan jidhka iyo dibedda heerkul-caddeyn illaa dhowr tobanaan darajo oo ka hooseeya eber. Xitaa ilaalin dhammaystiran oo dheeri ah, moodooyinka qaarkood ayaa kuu oggolaanaya inaad si ficil ahaan u daboosho madaxa oo dhan markaad xirayso oo aad huwato daboolka.
Maxay yihiin noocyada ugu fiican?
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah jubbadaha ugu caansan uguna sumcad badan maalmaha qabow, Waqtigaan la joogo, waxaa jira noocyo dhar ah oo aan ku jirin baarkinka ragga ee ka mid ah soo bandhigooda jaakadaha.
Haddii aad u baahan tahay jardiino la awoodi karo, tixgeli noocyada sida Zara, H&M, Pull & Bear, Mango, Jack & Jones ama Uniqlo. In kasta oo ay ka jaban yihiin, haddana waa kuwo casri ah oo adkeysi leh.
Maalgashi aad u ballaadhan ayaa ku lug leh jardiinooyinkii ugu dambeeyay ee ka soo jeeda Kanada Goose, Woolrich, Moncler ama The North Face. Meel dhex dhexaad ah marka la eego maalgashiga waa noocyo sida Superdry, Patagonia ama Columbia. Waa in la ogaadaa in iibinta dhammaan noocyadan ay ku dabaqaan qiimo dhimis jardiinooyinkooda ragga, waana sababta ay u tahay fursad weyn in lagu maalgaliyo mid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Parkas Ragga
Jimicsiyo leh kubbadda lagu ciyaaro